Madaxweynaha Soomaaliya Col. Cabdullahi Yuusuf oo shalay maleeshiya cusub ku soo kordhiyay magaalada Kismaayo iyo Suuqa Bakaaraha oo ay dad badan hantidooda u badan dahabka iyo lacagta ka qaadanayaan kadib markii ay maqleen warar sheegaya in ciidamo taageersan Col. Cabdullahi Yuusuf iyo Cali Maxamed Geeddi oo doonayaa in ay weerar ku qaadaan Suuqaasi. Ruunkinet 08/01/07
Madaxeynaha Soomaaliya Col. Yuusuf oo dhawaan booqasho ku tegay Kenya, Itoobiya ayaa ku laabtay Baydhabo shalay.
Warka ayaa intaasi ku daraya in maleeshiya cusub oo shalay laga keenay Puntland gaar ahaan degaanka Gaalkacyo ee gobolka Mudug ay tageen magaalada Kismaayo si ay awood ballaaran ugu yeeshaan Jubbada Hoose..
Maleeshiyaadka laga keenay Puntland ayaa la sheegay in ay haatan kor u dhaafayaan 5 kun iyadoo loo qeybiyay Baydhabo, Beledweyne, Jowhar, Muqdisho iyo Kismaayo.
Col. Yuusuf ayaa la sheegay inuu doonayo in uu saldhig ka dhigto magaalada Kismaayo kadib markii ay awoodda Kismaayo gacata ku dhigaan taageerayaashiisa.
Maleeshiyaadkan ayaa la sheegay in ay taageerayaan ciidamada Itoobiya iyo taageerayaasha Cali Maxamed Geeddi.
Dhanka kale, warar lagu kasoon yahay oo aan ka helnay magaalada Muqdisho ayaa ku waramaya in dadbadan ay haatan billaabeen in ay hatodooda gaar ahaan lagacta iyo dahabka ka qaadanayaa suuqa Bakaaraha ee ugu weyn magaalada Muqdisho.
Arrintan ayaa ka dambeysay kagadaal markii ay soo baxeen warar sheegaya in maleeshiya aad u hubeysan oo ka yimid Puntland iyo qaar kale oo taageersan Prof. Cali Maxamed Geeddi ay doonayaan in ay weerar ku soo qaadaan Suuqa Bakaaraha ayagoo ku andacoonaya in ay hubka ka uruurinayaan.
Ciidamada dowladda KMG ah oo inta badan ka kooban taageerayaasha Cabdullahi Yuusuf iyo Cali Maxamed Geeddi iyo qaar kale oo taageersan Dabageed ayaa la sheegay in ay si weyn u doonayaan in ay qaataan hantida taal Suuqa Bakaaraha inta aan la sameyn ciidan qaran oo ay Soomaalida u dhantahay.
Cabdulahi Xuseen, Ruunkinet, London